नेपाली छोरीको सान : कोरियाको पहिलो प्रहरी अधिकृत नेपाली चेली सम्झना राई बनिन् ! -सम्मान स्वरुप एक शेयर गरौँ।::Point Nepal
नेपाली छोरीको सान : कोरियाको पहिलो प्रहरी अधिकृत नेपाली चेली सम्झना राई बनिन् ! -सम्मान स्वरुप एक शेयर गरौँ।
नेपाली मुलकी चेली सम्झना राई कोरियन प्रहरी*मा प्र’हरी अधिकृत भएकी छिन् । दक्षिण कोरियाको प्रहरी अधिकृतको रूपमा पहिलो पटक नेपाली मुलकी चेली भर्ती भएकी हुन् । सन् २०१० मा कोरिया*बाट नेपाल भ्रमण आएका कोरियन युवा*सँग प्रेममा परेपछी त्यसै वर्ष उनी भिजिट भिसामा कोरिया प्रवेश गरेकी थिइन् । भिजिट भिसामा कोरिया प्रवेश गरेकी उनी प्रवेश सँगै उनका प्रेमी कोरियन युवासँग नै विवाह गरेर कोरियामै बसिन्। नेपालको भोजपुरमा जन्मिएकी २८ वर्षीय सम्झना राई उक्त प्रेमी कोरियन युवासँग विवाह गरी कोरिया पुगेकी थिइन् ।
उनले छल्नाम्दोस्थित छुसन विश्वविद्यालयमा प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी सङ्कायमा भर्ना भई अध्ययन समेत पुरा गरिन् । २८ वर्षीय राई कोरियन प्रहरीमा जागिर खाने पहिलो नेपाली महिलासमेत हुन् । सन् २०१५ मा छुसन विश्वविद्यालयमा अध्ययन पुरा गरेकी उनले उक्त विद्यालयमा नै केहि महिना शारिरिक, स्वास्थ्य र यहाँको प्रशासन सम्बन्धी परिक्षामा एकपछि अर्को उत्तीर्ण गर्दै गईन्।
परीक्षामा उत्तीर्ण भएसँगै आफ्नो समाचार कोरियन सञ्चार माध्यममा आए*पछि थाहा पाएकी राईले पुलिस अफिसर बन्ने सपना पुरा भएको बताएकी थिइन्। नेपालमा प्रहरी बन्ने सपना भए पनि उचाईँ, उमेर र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आफू बञ्चित भएको राईले बताएकी छिन्। यसरी प्रहरी अधिकृत भएपछि उनी निकै खुशी छिन्।
हार्दिक बधाई क्याप्टेन बिजय लामा अ’न्तर्राष्ट्रिय मानव अ’धिकार पुरष्कार २०२० अवार्डबाट सम्मानित,,,हेर्नुहोस।